Ukusuka kwisixeko sethu kutsha nje kufundwe nge-shishi yesixeko, ukudaya kunye nomzi-mveliso wokuprinta ukukhuthaza ushishino lokushicilela ukuba “lube sezingeni eliphezulu, ifashoni eluhlaza”, “indawo yonyaka yokushicilela shish edishini kunye nedayi (ehlanjwe) yokufaka amanqaku kumashishini” (emva kwalapha ekubhekiselelwa kuyo njenge "inkqubo yokuhlela"), emva kokuhlengahlengisa kunye nokwenza inkqubo kwisiseko sentsusa, kunye nokunyusa utyalomali lweshishini, ukuphuculwa kwendlela entsha yokusebenza, njengesikhombisi sokukhokela kuxanduva lwentlalo. Kwangelo xesha, ushicilelo lwendawo kunye namashishini okudaya nawo athabathe inyathelo lokubamba umboniso wokuthengwa kwe-Intanethi kunye neminye imisebenzi ukutsala amashishini angaphezulu kwe-100 okuphuma kwishishini lokushicilela nokudaya kwilizwe liphela, ukuze kuphuculwe umgangatho kunye nokusebenza ngokukuko. ushicilelo lwesixeko sethu kunye namashishini okudaya kunye nokuqinisa umgangatho.
Seta izikhombisi ezitsha zesikhokelo
Kuxelwe ukuba inkqubo yokulungisa amanqaku ehlengahlengisiweyo neyenzelwe ukulunga yenziwe ngamacandelo amathathu: amanqaku asisiseko, iprojekthi yamanqaku ongezelelweyo kunye neprojekthi yamanqaku angaphantsi. Phakathi kwazo, eyona rhafu ihlawulelwayo yamashishini anamanqaku asisiseko iya kubonelelwa lisebe lerhafu, idatha yokusetyenziswa kwamashishini iza kubonelelwa lisebe lemithombo yendalo, idatha yokusetyenziswa kwamandla kweshishini kubandakanya umbane kunye nomphunga iya kubonelelwa ngamandla isebe kunye nenkampani yokubonelela ngomphunga, kunye nedatha yokurhoxiswa kwamanzi kwishishini (kubandakanya amanzi empompo, amanzi anikezelweyo kunye namanzi amashishini) ziya kubonelelwa yinkampani yokuhambisa amanzi.
Iiprojekthi zokudibanisa okanye zoluhlu lweeprojekthi zibandakanya ukuphuculwa kobugcisa, uphando kunye noyilo lophuhliso, imodeli yeshishini, ukuphuculwa kolawulo, ubungakanani beshishini namandla, ukuphuculwa kokhuseleko, njl. Umzekelo, malunga nophuculo lwetekhnoloji, xa utyalomali lonyaka lonyuselo lwetekhnoloji lulugqitha 1 Isigidi se-yuan, amanqaku ayi-0,1 ayakongezwa kuyo yonke i-1 yezigidi ze-yuan ezityalwayo, kunye nenqanaba elingaphezulu kwe-3.0.0 amanqaku amashishini afakwe inkqubo yokuhambisa i-dyestuff ngokuzenzekelayo kwaye isetyenziswe. Ngokwe-r & d kunye noyilo, iziko lobuchwephesha, iziko loyilo lwemizi-mveliso, indawo ephambili kwelebhu yamashishini, kunye nophando lwezobunjineli beshishini kunye nophando lwetekhnoloji ngexesha lokuqinisekisa liya kunikwa amanqaku angama-0,2 kwinqanaba likamasipala, amanqaku ayi-0,5 kwinqanaba lephondo, kunye ne-1.5. amanqaku kwinqanaba likazwelonke. Ishishini lephondo eliphezulu nelitsha kwitekhnoloji entsha kunye ne-0,2, ishishini lesizwe eliphezulu kunye netekhnoloji entsha kunye ne-0,5, ishishini elikhethekileyo kumashishini amatsha kunye ne-0,2, isayensi yephondo kunye netekhnoloji yezobuchwephetsha amashishini amakhulu kunye ne-0.3, ishishini leqela elinye lephondo kunye ne-0.4, ishishini lesizwe elinye kunye ne-0,4. Kukho imodeli yeshishini, ukukhuthaza ulawulo, ukuphuculwa kokhuseleko kunye neminye imibandela eyongezelelweyo. Ewe kunjalo, kukwakhona nezinto ezizakhutshwa, ngakumbi kubandakanya iimeko zokophulwa kwemeko yokusingqongileyo, ukophulwa kwezokhuseleko emsebenzini okanye ukuphazamiseka kwezomlilo kuphandwa kwaye kutshutshiswa, kwaye amashishini aya kuncitshiswa amanqaku. Ngale nkqubo yokuvavanya, ithemba lendawo liya kukhokela ushicilelo kunye nokudaya amashishini ngokubhekisele kumgangatho, wokuphela ophezulu kunye nefashoni eluhlaza.
Umthengisi okhethiweyo kwi-Intanethi
Ukushicilelwa kwe-Quanzhou kunye nokudaya imisebenzi yokuziqhelanisa neendlela ezintsha, kungekuphela kumgaqo-nkqubo, kodwa nasekupheleni kweshishini. Kutshanje, I-dyestuffs yokuqala kunye namashishini ancedisayo akwi-intanethi aqaliswe ngushishino lokushicilela nokudaya eShishi. Kufundwe ukuba ngeentsuku ezili-11, iqonga lezorhwebo nge-e-commerce libone ngaphezu kwe-600,000 iphepha lokujonga, olona lubonileyo lolukhetho lomboniso lubone ngaphezu kwe-350,000 iphepha lokujonga, kunye namajelo eendaba oshishino angama-30 kunye neiwebhusayithi ezingaselunxwemeni ziye zaxela ngaphezulu kokujonga kwiphepha elingama-300,000. Uninzi lwamashishini ashicilelayo kunye namashishini okudaya athatha inxaxheba kumboniso we-Intanethi kunye nentengiso, kunye nokuthengwa kwamaqela kumboniso kunye nentengiso. Ngokwezibalo ezingaphelelanga, amashishini angaphezu kwayi-100 amashishini ancedo lokudaya avela ekhaya nakumanye amazwe, kubandakanya uZhejiang Longsheng, uChuanhua Zhili, u-Anoki, uZhejiang Boao, uZhejiang Wanfeng njalo njalo, nabo baya kumboniso, etsala ngaphezulu kwe-20,000 yababukeli basekhaya nabangaphandle.
Kuxelwa ukuba iidestuffs kunye neeararies zentengiso ye-Intanethi ziya kuseka iqonga elitsha lonxibelelwano kunye notshintshiselwano phakathi kwamashishini edayi, amancedo okushicilela kunye nokushicilela namashishini okudaya, kubonelela ngesiteshi esitsha sokutshintshiselana nentsebenzo phakathi kwamashishini anyukayo naphantsi emazantsi emizi-mveliso. I-chain ekhaya kunye nakwamanye amazwe, kunye nokubonelela ngegumbi lokufundela elitsha lotshintshiselwano kunye nofundo phakathi kwamashishini okushicilela nokudaya kunye nabasebenza kwishishini abanxulumene nalo.
Abaququzeleli bathi iindleko eziphantsi kunye nokulula kweentengiso zorhwebo kwi-Intanethi akunakuthelekiswa nanto ngaphandle kwe-intanethi kwimeko yangoku yokuthintela nokulawula ubhubhane kunye nokuqalisa komsebenzi kunye nemveliso. ”Njengomboniso, singatyelela kwaye sikhangele indawo yasekhaya nakwamanye amazwe. Abathengisi bezitayile ze-dyestuff kwaye babelana ngezifundo ezininzi zeengcali nge-e-commerce yeqonga ngaphandle kokushiya ikhaya. "Utshilo omnye umbonisi. Kwaye ishishini lithe, ngomboniso we-Intanethi kunye nothethwano nge-Intanethi lwabasebenzi bokuthengwa kwempahla, amashishini okuthengwa kwempahla yedayi kunye nezinye Ukuqonda ukuthelekiswa komgangatho kunye nexabiso, kungekuphela nje kulula kakhulu, kwaye abathengisi abathandayo, iimveliso ezikhethiweyo, ukunciphisa iindleko zokuthenga.
Ixesha lokuposa: Jul-29-2020